कांग्रेस नेता एनपी साँउदले भनेः- ‘यो पटक मेरो चुनाव जित्ने पालो हो’
गृहपृष्ठ अतिरिक्त कांग्रेस नेता एनपी साँउदले भनेः- ‘यो पटक मेरो चुनाव जित्ने पालो हो’
कांग्रेस शुक्लाँफाटाले आयोजना गरेको कार्यक्रता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता साउँद । तस्विर/हिक्मत भण्डारी
महेन्द्रनगर । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री एनपी साउँदले यो पटक आफ्नो चुनाव जित्ने पालो भएको बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस शुक्लाँफाटा नगर कार्य समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रता भेटघाट तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता साउँदले पार्टीको आन्तरिक प्रजातन्त्रमा हारजित स्वभाविक हुँने र आफुले पनि संसदीय निर्वाचनमा एक पटक जित्ने, अर्को पटक हार्ने क्रम चलेको हुँदा, यो पटक आफ्नो जित्ने पालो भएको बताएका हुन् ।
झलारीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता साँउदले के–के भने, जस्ताको त्यस्तैः
आज नेपालमा ६० प्रतिशत युवा छन् । जसको उमेर ४० वर्ष मुनी छ । तर, नेपाली कांग्रेस भित्र आमसभामा जादाखेरी अहिले पनि ५० प्रतिशत मान्छेहरु चाहि बुढापाखा नै देखिन्छन् । मञ्च र बाहिर हेर्दाखेरी पनी ५० नाघेका मान्छेहरु देखिन्छन् । त्यसकारण, यो पार्टीलाई युवाहरुको पार्टी कसरी बनाउने, यो पार्टीलाई तरुणको पार्टी कसरी बनाउने, यो पार्टीलाई समावेशी पार्टी बनाएर कसरी लैजाने ? यो हाम्रा अगाडी स्पष्ट चुनौतीको रुपमा आएको छ ।
त्यसकारण म आदरणीय दाजुभाई दिदी बहिनीहरुलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, यो नयाँ पिडीलाई हामीले अगाडी बढाएर लैजानुपर्छ । मलाई पनि अग्रज दाईहरुले युवा नेता भनेर सम्बोधन गर्नु हुन्छ । तर मैले आफुलाई ऐनामा हेर्दा कपाल आधा फुलिसक्या छ ।
म तपाईहरु सबैलाई अगाडी राखे भन्छु । तपाई युवा नेताहरु अगाडी आउनुस्, यस्ता नेताहरु अगाडी आउनुस्, यसमा नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरको भार हामीले राख्दाखेरी हाम्रा जिल्ला भरी छरिएका हाम्रा पार्टीका साथीहरुलाई सान्तवना, राहत महशुस गराउदै पार्टीलाई हाकेर लैजाओस् । पार्टीलाई अगाडी लैजानु पर्छ, पार्टीलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने युवाहरु तपाईहरु अगाडी आउनुस्, म यसका लागि पनि तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । तपाईहरुका अगाडी सम्भावना छ ।
अगाडीकाले ठाउँ नछोडेपछी पछाडीका मान्छेहरु कसरी आउछन् । विस्तारै हामी अगाडीका छोड्दै जान्छौ । हामी भन्दा अगाडीका पनी छोड्दै जान्छन् । यो कांग्रेसलाई युवाको कांग्रेस, गतिशिल कांग्रेस, बलियो कांग्रेस बनाएर अगाडी बढौं, म तपाईहरु सामु यो आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अब यो कञ्चनपुर सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी, भूमिहिनहरुको समस्या भएको जिल्ला हो भन्ने कुरामा कुनै पनि दुविधा छैन् । कञ्चनपुरका ९ ओटा स्थानीय पालिकाबाट छनौट हुँदाखेरी ४ ओटा नगरपालिकाहरु परेका छन् । ३ नं. बाट दोधारा–चाँदनी, २ नं. बाट बेदकोट र कृष्णपुर अनि १ नं. बाट बेलौरी गरेर ४ ओटा नगरपालिका परेका छन् । भागको हिसाबमा हेर्ने हो भने १ र ३ नं.मा १÷१ मात्रै परे भने २ नं. २ ओटा परेका छन् । तर, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले यो भन्दा अगाडी नै सम्झौता गरिसकेको हुनाले, गुनासो के भयो भने, हामीले त यो आयोग बन्नु भन्दा पहिले नै सम्झौता गरिसकेको हुँदा, हाम्रो पाले अली पछि भएको भए पनि हुन्थ्यो, अली अघी भएको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने हो । तर, हामीले सम्झौता गरिसकेको हुँदा हामी छुट्नु हुन्न भन्ने यहाँबाट आवाज उठ्यो । यो आवाज उठ्ने बेलानै मैले मैले पनि केन्द्रमा भूमिहिनको अध्यक्षलाई फोन गरेर, एउटै मात्र हामीले मेयर जितेका छौं । हुन त दुवै स्थानीय तह हाम्रै हुन्, तर, शुक्लाफाँटा छुट्नु हुन्न हामी त अन्यायमा पर्यौ भने पनि उहाँले के भन्नु भयो भने पछि, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि माघ १२ गते सम्मका लागि आचारसंहिता लाग्दै छ । माघ १२ गते पछि तत्काल सूचना निकालेर झलारी (शुक्लाफाँटा)लाई पनि समावेश गर्छौ, भनेर भूमिहिनका अध्यक्षले बचनबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
यस बिषयमा कसैलेपनि आत्तिनु पर्दैन्, झलारीका मेयरसापले पनि कुरा केन्द्र सम्म पुर्याएका रहेछन् । तपाईहरुको जग्गा नाप जाँचकालागि कुनै कमजोरी हुने छैन्, यसमा हामी तदारुकताका साथ लाग्ने छौं । म सबैका अगाडी यो बचनबद्धता गर्न चाहन्छु ।
तपाईहरुका माझ अर्को कुरा म के राख्न चाहन्छु भने, यो पार्टीको आन्तरिक प्रजातन्त्रमा कहिले काँही हारजित हुन्छ । हार जित स्वाभाविक नै हो । अब म पनी संसदमा हारेको छु । पार्टीको आन्तरिक चुनावमा त अहिलेसम्म धानेकै छु । तर, संसदको चुनावमा म चाहि हारेको पनि छु हेनुर्स, । एकचोटी हार्छु अनि जित्छु, अझ हराइहाल्छन् । अझ जित्छु, फेरी त जितेर देलान् भन्छु, अझ हारिहाल्छु । तर, यो पाली मेरो जित्ने पालो हो ।
त्यसकारण म तपाई साथीहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीसबैले एकजुट भएर अगाडी बढ्नुपर्छ । नगर, जिल्ला, क्षेत्र र प्रदेशका सबै साथीहरु यही हुनुहुन्छ्, २० प्रतिशत ठाँउ मनोनितको लागि राखिएको छ । मलाई चाही कुनैपनि ठाँउमा सोध्नु पर्दैन्, तर, जो मान्छेलाई निर्वाचनमा हामीले ल्याउन सकेनौं, ती मान्छेहरुको कहिलेकाही म आफै संग लगायत तपाईहरु संग पनि चित्त दुखेको होला, तर तिनीहरुको गाँउमा भोट छैन् भन्ने होइन नी, ति सबै हाम्रै कार्यक्रता हाम्रै दाजुभाई हुन्, जो मान्छे हामी संगै टक्कर दिइरहेको त्यसका भोट के कम होलान? त्यसकारण तिनीहरुलाई पनि समावेश गरेर ल्याउनुस तपाईहरु ।
यो प्रजातन्त्र भनेको जो जित्यो त्यसको मात्रै होइन्, प्रजातन्त्र भनेको कोही नहार्ने व्यवस्था हो । जित्नेको व्यवस्था मात्रै प्रजातन्त्र होइन, जित्नेको व्यवस्था त तानाशाही हो । म जिते भने मेरै भनेको मात्रै हुनुपर्छ भनेर जुन व्यवस्थामा भनिन्छ, त्यो त बाबारको, अकबरको, राणाको शासन थियो, जितेकै लठ्ठीको भरमा शासन हुने । यो शासन कस्तो हो भने, यो साझेदारीको शासन हो, तिमी पनि मिलौं, म पनि मिलौं । हामी कोही न हारौं, हामी सबैको प्रतिनिधित्व होस् भनने शासन हो ।
पार्टीको आन्तरिक चुनावमा भएका यी सबै पुराना कुरालाई भुलेर सबै साथीलाई समेटौं । वडाले वडाका चित्त दुखेका साथीहरुलाई समेटौं । नगरका साथीले नगरलाई समेटौं । आफ्नै बलबुतामा चुनाव कोही जित्दैन्, सबैले सबैलाई सहयोग गरौं । त्यसैले पहिले हार्मी आफ्नो पार्टी बनाउनु पर्छ । पार्टीलाई एकजुट राख्नु पर्छ । पार्टीलाई साझेदारीका आधारमा अगाडी बढाउनु पर्छ ।
तपाईहरुले कम्युनिष्ट जितेको त देख्नु भयो, यो क्षेत्र नं. २ २५ वर्ष पछाडी परेको छ । मैले पहिले के भनेको थिए भने, महेन्द्रनगरमा घुसुडी नामको बस्ती महेन्द्रनगर जस्लाई भन्थ्यौं, त्यो एउटा घुसुडी गाँउ थियो । त्यो घुसुडी गाँउ हटाएर त्यसलाई महेन्द्रनगर बनाइसकेपछि, २०२० साल देखि अहिले ०७८ साल सम्म लगभग ५० वर्षको फाउण्डेसन महेन्द्रनगरको विकासको लागि लागेको छ । तर, यो २ नं. क्षेत्रमा यहाँको विकासको फाउण्डेशन, जो उनले ५० वर्षमा गरे त्यो म १० वर्षमा गर्छु भनेर मैले संकल्प गरेको छु ।
यो १० वर्षमा ३ ओटै नगरपालिकामा रिङ्ग रोड बनाउला, मुख्य–मुख्य ठाँउमा घाट तर्नलाई पुल हालौला, चाहे त्यो चौधर नदी होु्, चाहे त्यो सुनवरा, स्याली होस्, चाहे दोदा र मोहना हुन्, यसका बस्तीका किनारका मान्छेले रुनु पर्ने छैन्, विस्तापित हुनुपर्ने छैन् । त्यहाँ नदीमा तटबन्ध हालौला । यहाँ मात्रै शुक्लाफाँटा नगरपालिकालाई २.५ अर्ब रुपैयाँ एउटा नमूना नगरको रुपमा विकास गर्ने भनेर एडिबीको प्रोजेक्ट हालेको हो ।
यहाँ सभागृह बनाउन सकिन्छ । चक्रपथ बनाउन सकिन्छ । यहाँ ढल निकास गर्न सकिन्छ । यहाँ मसानघाट व्यवस्थीत गरेर राख्न सकिन्छ । यहा नदी तटबन्धहरु बनाउन सकिन्छ ।